Chitsauko Chishanu | Faraitose's Blog
Nekuona kwandinoita zvakadai nezvimwewo zvakadaro, ini ndino tenda kuti marovero anoita mwoyo akadai:
Auricle rino tanga iro kugwinha, nekudaro rosundidzira ropa riri mukati [rinaro rakawanda nekuti ndiro dirimo retsinga dzinounza ropa kumwoyo, marino jenga richimbo mira] kuti ripinde mumaventricle emwoyo, kana ventricle razara, mwoyo unosimukira, wokakatira tambo dzawo dzese, wogwinha, ndiko kurova. Nenzira iyoyi unobva wateurira ropa chiriporipo mutsinga Atari ropa rabva muauricle, moyorudyi uchidarowo kumapapu neropa dzinounzi tsingavheini-inenge-atari [asi iyo irizvayo Atari pamaumbirwo wayo nemashandiro ayo] iwo moyoruboshwe uchiteurirawo ropa rawo kuayota nemaatari emuviri wose.
Kuita uku kwe auricle neven’tiri, kunoita kuchitevedzana, asi zvichipindirana nekudzidzana zvekuti zvinooneka kunge zvirikuitika nguva imwechete, kurova kuri kumwechete, kunyanya mumhuka miridziya: mwoyo unenge uchirova zvinochimbidza. Izvi zvinoenzana nezvinoitika pamuchina unoti kana vhiri rimwe richifambisa rimwe, ese anenge ari kufamba kamwe. Zvino cherechedzawo kanhu kanoiswa pagidi kanoti pano dzviny’wa tiriga, dombo rodonha rotema, simbi yofamba, moto wokweny’wa wobakisa unga, unga hwoputika, moto wacho wosvetukira mukati uchibvira uchienda mberi, bara robhururuka ronobaya chinangwa: zvose izvi zvitevedzanwa. Nemachimbidzikwa azvinoitikira, zvinenge zvinoitikira nguva imwe, yekungoti bwai ziso. Kumedzawo kunodaro. Dzinde rerurimi rinosimudzika, mukanwa momanidzika, kudya kana chinwiwa zvosaidzirirwa shure, gurokuro rovharwa netsandarunyama yaro, pamwe neepiglottis, kumuromo kwemedzero kobva kwashamiswa nekusimukidzwa netsandanyama dzayo zvinoita tsaga rino vhurwa nekusimudzwa muromo waro kuti ripakirwe; kudya kana zvinonwiwa zvinenge zvava kumedzwa zvino dzvinyirirwa pasi netsandanyama dzinochinjika, zvichi dhonzerwa pasi netsandanyama dzerurefu. Kunyange zvakadaro, zviitiko izvi zvinoitwa nenhengo dzakasiyanasiyana dzinoita zvakapesana, zvinoitika zvichinyatso fambidzana nekutevedzana zvichiita sekunge chinhu chimwe chete chaitka chaburitsisa chinhuwo chimwe chatinoti ‘kumedza’.
Zviri pachena kuti izvi ndizvozvo zvimwe chete zvinoitika mumwoyo: uriwo unoita kunenge kumedza ropa rinobva kutsinga nekuri tambidza mberi. Kana ani zvake [akaisa izvi mupfungwa] akanyatso tarisa kurova kunoita mwoyo mumhuka mhenyu, haaone chete [sezvandamboreva], mwoyo uchisimukira, uchida kuno batana neauricle, kunge zviri kurova nguva imwe chete iyoyo; anoona zvakare kuti pane muchinjizira pamoyorudyi unokwira uchi mona paunenge uchiita basa rawo. Panonwa hachi richimedza mvura, zvinooneka kuti pakumedza nekudzika kwainoita ichienda mudumbu maro, mimedzo yegayega inotevedzana. Kumedza kwacho kuchinzwika kurira kana neruoko runenge rwaiswa pahuro. Ndizvo zvimwe chete zvinoitika mumwoyo, munoti chipungudzwa cheropa rinobva kutsingavheini rino tambidzwa kutsingaatari, parinenge richinzarwo ndipo patinonzwa rugugu muchipfuva.
Marovero anoita mwoyo ndiwo sezvatsanangudzo iyi. Mwoyo basa rawo ndiro rega iri rekufambisa ropa nekuripa sairiro mutsingaatari inorisvitsa kunonogumira muviri kwese. Sakupfura kwatinonzwa mutsinga isairwa reropa ririkubva kumwoyo.
Zvino toto sungirwa kubvunza nekurunda pfungwa dzedu pane zese zvatinoona, maererano nemwoyo [kunze kwekungo fambisa ropa], kuti unoitawo zvimwe here kuropa senge kupamhidza rudziyo, mweya kanakumwewo kurinakisa.Parizvino ngati gutsikane kuti tarakidza kuti kurova kwawo mwoyo ndiko mafambisirwo anoitwa ropa richibva kutsingavheini richienda kutsingaatari dzemuviri wose richipfuura nemumaventricle.
Vazhinji vanozvibvuma zvavo izvi, vachizvirondera vega kuti maumbirwo akaita mwoyo unoenderana nebasa rakadaro, pamwe nemarongerwo emavharuvhu, paari nemashandiro awo. Asi vanoita sevano tsvanzvadzira murima nekusaona zvakanaka vachibatanidza zvinhu zvakawanda zvisinga toodzane, zvinopikidzana nezvisingakwane. Zvimwe zvavanotaura ndezvekufungidzira chete.
Mafungiro angu anoti chanyanya kupinganidza apa chinhu chimwe chete: mwoyo nemapapu zvakanyanya kubva zvabatana nekuswederana mumuviri wemunhu. Vaongorori pavaiona atari-inenge-vheini, vachionao vheini-inenge-atari ichipinda mumapapu isingazooneka, vaibva vazvishaira pazvo; voshaya kuti moyorudyi unosvitsa ropa kumuviri sei kana kuti moyoruboshwe unowana sei ropa kubva kuvheinicava. Mashoko aGaleni anorakidza zvandareva paaitsoropodza Erasistratus pamusoro penyaya yekuti mavheini anotangirepi achiita basa rei. Anoti: uchapindura uchiti zvakarongwa kuti ropa rigadzirwe muchitaka rozoendeswa kmwoyo kwarinozono pedziswa kugadzirwa kuti rive rakanaka. Pfungwa iyi hainazvayo kukanganisika, nekuti hapana chakanakisa chingabva changoti mugadziro mumwechete chobva chanaka kana kuti nemudziyo mumwechete chobva chakwana. Kana zvirizvo, tirakidze imwe tsinga inopungudza ropa kubva mumwoyo ichiri fambisa kumuviri wose zvinoita maatari anofambisa mweya kumuviri wose. Apa honai pfungwa yakatonaka zvayo yarambwa naGaleni nekuti [mukusaona kuti ropa ringa ende sei] akatadza kuona tsinga inga kwanise kufambisa ropa kubva kumwoyo richienda kumuviri wose.
Dai pakange paine anobatsirana na Erasistratus kana kuti ai miririra pfungwa yake iri iyo yandinomiririra zvino [kana iye Galeni akati pachake pfungwa yacho haina kukanganisika] aingonongedzera kuayota setsinga inofambisa ropa kumuviri wose, murume uyu Galeni nenjere neruzivo rwake aipindura achiti chii, nhai? Akazoti atari iyi inofambisa mweya kwete ropa aibva adzimaidza Erasistratus [nekuti uyu aifunga kuti mweya waingogara muatari chete] asi achibva azvipinga pachake zvaibva zvanyadza nekuti aitsoropodza vamwe zvakasimba chaizvo vanga vasinga wirirane nepfungwa yake panyaya iyi. Aipokanidza zvakasimba nekurakidza zvekuonesa zvinerugutso kuti muatari ndimo muno gara ropa, kwete mweya.
Asi kana Galeni [asingazombokanganwikwa] akabvumidza [sezvaanoita kakawanda mugwaro pamusoro] kuti ‘maatari ose emuviri anobva muziatariguru, irowo richibva pamwoyo’ aka pamhidza zve kubvuma kuti ‘ropa ndimo marino gara muatari richitakurwa mutsinga idzodzo dsese, mavharuvhu matatu akaiswa panotangira ayota kubva pamwoyo anoita kuti ropa rinenge rabuda kubva mumwoyo ritadze rudzokera makare, usiki haungambonge waisa chakadaro anhengo yakakosha semwoyo iyo isina basa. Dai – ndinoti ini – baba vedu tese varapi vakatibvumidza zvese izvi mumazwi avo vega [sezvavanoita mubhuku ravo mandatora mazwi avo]ndino shaya kuti angarambe sei kuti atariguru iri harikodzere kuva iro rinotakura ropa ranyatso tsveneswa kubva kumwoyo richienda kumuviri wose. Zvimwe anga asati anyatso gadza pfungwa dzake. Vano mutevera nazvino vanenge vasina kunyatso podza pfungwa dzavo. Kunyanya kuswederana kwakata mwoyo nemapapu haaone kuti ropa rinobva sei kumavheini richienda kumaatari.
Kana nyanzvi dzeruzivo rweanatomi dzinoshupika napo apa zvishoma here [vanoti vakavhura tsingavheini-inenge-atari nemoyoruboshwe vanoona muzere ropa gobvu, riri kugwamba uye rasviba kuti ndoo] vogumisira vachiti ropa iri riri kusinina richibva kumoyorudyi richibudira moyoruboshwe nemumudzoro unokamura mativi aya. Izvi ndaramba, saka toto tsvaga nzira itsva. Nzira itsva iyi inonyatso gutsa zvekuti hazvizombo netsa kuona kuti zvandamboreva ndizvo chaizvo: zvekti rugugu rwemwoyo nekupfura kwetsingaropa, kufamba kweropa mutsinga richibva kumavheini richienda mumaatari nekuendeswa kunoitwa rpa kumuviri wose nemaatari.